Part1: Gịnị mere ọ bụrụ na ị na-eme adịghị doro anya ohere na iPhone?
Part2: Olee otú Kọwaa Space na gị iPhone
Part3: Gịnị akpọkwa ogide kasị ohere na gị iPhone
Gịnị na-eme ma ọ bụrụ na ị na-eme anya ohere na iPhone?
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ohere nchekwa na gị iPhone ga-kpochara mgbe nile, ọtụtụ ndị amaghị ihe mere ọ ga-mere na ihe ga-esi na ya pụta ma ọ bụrụ na ohere na-adịghị kpochara. N'okpuru ebe a bụ ole na ole ihe ịkọwa dị otú ahụ pụta:
Belata Performance - iOS arụnyere na gị na iPhone achọ ụfọdụ ohere ume. Ịhapụ zuru ezu ego nke free nchekwa na ngwaọrụ gị ana achi achi-eji ire ụtọ na-enweghị ntụpọ ịrụ ọrụ nke sistemụ. Ọ bụrụ na e nwere ezughị ohere na gị iPhone, o nwere ike na-amalite na-eme sluggishly.
Ngwa ngwa buut Usoro - Ebe niile faịlụ na-scanned site na sistemụ n'oge mobile buut, na-enweghị ohere, ịgụ isiokwu nwere ike ịghọ onye na-adịghị, si otú na-egbu oge buut usoro. Ọzọkwa, iPhone nwere ike buru mmezi oge na-agụ junk faịlụ nke-emekwa oge mgbe booting ekwentị.
Ọ dịghị New égwu - Ebe ngwa achọ ohere na ngwaọrụ gị na-arụnyere, na-erughị free nchekwa pụtara enweghi ike wụnye ọhụrụ ngwa.
Ọ dịghị New Images ma ọ bụ Videos - Ị nwere ike ịzọpụta ọhụrụ media faịlụ ma ọ bụ ihe oyiyi ma ọ bụrụ na e nwere ezughị ohere dị na gị iPhone.
Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ disk ọcha ngwa maka iPhone na ndị ọzọ na Apple ngwaọrụ, ndị kacha na kasị mma dị ngwọta bụ iji Wondershare SafeEraser. Ọ na-abịa ihe dị mfe na-eji interface, na ọtụtụ n'ime ya iPhone ihicha nhọrọ nwere ike inweta ya isi window. Ị nwere ike ibudata Wondershare SafeEraser dị ka kwa n'elu ikpo okwu nke na kọmputa gị (Windows ma ọ bụ Mac) site na njikọ ndị nyere n'okpuru.
E ole na ole nzọụkwụ aka mgbe ọ na-abịa nhicha gị iPhone iji Wondershare SafeEraser nke na-kọwara dị ka n'okpuru:
1.Log na gị na kọmputa na ihe ọ bụla nchịkwa na akaụntụ.
2.Use na njikọ nyere n'elu ibudata ziri ezi version nke Wondershare SafeEraser dị ka ikpo okwu gị na kọmputa. (A Windows kọmputa na-eji ebe a maka ngosipụta.)
3.Install usoro ihe omume gị na kọmputa na iji mgbe echichi usoro.
4.After wụnye, malite Wondershare SafeEraser site abụọ-ịpị ya akara ngosi.
5.Use eriri data USB jikọọ gị iPhone ka PC.
6.Wait ruo mgbe Wondershare SafeEraser downloads na installs achọrọ ọkwọ ụgbọala maka gị iPhone na kọmputa.
7.Once mere, site na isi window nke usoro ihe omume, pịa ihichapu ehichapụ faịlụ button (-anọchi anya ya ekpofu ahịhịa nnọchianya).
8.Wait ruo mgbe SafeEraser enyocha kwa maka ehichapụ faịlụ na ike-ewepụ na-adịgide adịgide si gị iPhone.
9.After na scanning usoro completes, site n'aka ekpe ebi ndụ nke interface, pịa iji họrọ Atiya nwere ndị ehichapu data.
10.From ala-nri akuku nke nri ebi ndụ, pịa ihichapu Ugbu a-ewepụ ihe niile na-ehichapụ faịlụ site na gị iPhone.
Cheta na: Ị nwere ike mkpa nye nkwenye gị na niile nkwenye igbe na-egosi na iji nọgide na na mwepụ usoro.
11.Repeat nzọụkwụ 10 na-adịgide adịgide wepụ ehichapụ faịlụ site na ndị ọzọ edemede dị ka mma.
12.Once mere, azụ na isi window, pịa Space nchekwa button (na akara ngosi na ihe nnọchianya nke a skewed image).
13.From ekpe ngalaba nke window nke na-abịa elu ọzọ, pịa mpikota onu mpikota onu oyiyi nile zọpụta na gị iPhone.
Cheta na: Compressing oyiyi nile na gị iPhone-atọhapụ elu a dị ịrịba ego ohere na-i nwere ike iji ọzọ na nzube.
14.Back na isi window, pịa 1-Click nzacha na mkpocha button (nọchiri anya a sweeper akara ngosi).
15.Wait ruo mgbe SafeEraser-enyocha kwa maka junk na-achọghị na faịlụ na ejibeghi ngwa ọdịnala na gị iPhone.
16.After Wondershare SafeEraser completes scanning, ego ma ọ bụ uncheck checkboxes na-anọchi anya faịlụ na ị chọrọ iji wepu gị iPhone. Ọ bụkwa tụrụ aro na ị dị ọcha niile ejibeghi ngwa ọdịnala site na ekwentị gị nakwa iji na-eji ndị ohere nchekwa optimally.
17.Once a mere, na ala-nri akuku nke interface, pịa nzacha na mkpocha.
18.Wait ruo mgbe SafeEraser ọcha elu họrọ data gị iPhone.
19.Once data mwepụ nkwenye window na egosiri, ị nwere ike imechi window na ụzọ ọpụpụ SafeEraser.
20.Restart na kpochara iPhone na malite iji ya na-ahụkarị.
Gịnị akpọkwa ogide kasị ohere na gị iPhone
E nweghị ruru ma ọ bụ oke maka nke a. Otú ọ dị, ọ na-ọtụtụ ndị na-hụrụ na cache na nchọgharị akụkọ ihe mere na-anakọtara gị iPhone karịrị oge na-erepịakwa a bukwanu ego nke ohere. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị na-egwu egwuregwu na gị iPhone na nọgidere na-azọpụta ọganihu, a ezigbo ego nke uwa na-ikwusasi zọpụta data dị ka mma. Tụkwasị na nke a, n'ihi na nke igwefoto àgwà, na size nke weghaara oyiyi bụ nnukwu.
Iji lebara ihe, ị nwere ike mgbe nile na-nhicha ahụ junk faịlụ, uninstall na mgbe ahụ reinstall egwuregwu wepụ enweghị isi egwuregwu ọganihu ma ọ bụ ndị ọzọ na 'irighiri' si gị iPhone, na N'ezie, ọ bụrụ na ị na-eji Wondershare SafeEraser, ị nwere ike mgbe niile mpikota onu oyiyi na gị iPhone ịzọpụta ọzọ disk ohere.
> Resource> Clean-elu> Olee otú iji Kọwaa Space na gị iPhone